Ruvara Kombuta Yakashongedzwa YechiMuslim Kunamata Hat
Makomputa akashongedzwa ngowani, zvese zvichena uye ruvara zvinogona kugadzirwa, zvinopfekwa nevarume vechiMuslim zuva nezuva, saizi yevakuru: 54-58CM, vana: 50-53CM, vanonzwa zvakanaka, akasiyana emarudzi mapatani, nekuti mutengo wakachipa, huwandu hwekutengesa hombe, kutumira kunze kwenyika zhinji dzeMuslim dzakadai seSaudi Arabia neAfrica.
Vhura nekuvhara, kugeza maoko chete
Yakanaka ine mavara eembroidery yemakomputa-iwe uchada iyo yakasarudzika yerukwa, iyo yakashongedzwa pakati peyemhando yepamusoro yeMuslim Kunamata Hat maitiro beanie. Muslim Worship Hat yakagadzirirwa kukwana pamusoro penzeve dzako uye yakakodzera kune mazhinji mabvudzi
ALL NATURAL COTTON-Synthetic machira anogona kunge achikwenya uye asingafemeki. Yedu-yakasikwa donje jira rakanakira kushandiswa kwegore rose nekuti rinoburitsa mwando muzhizha rinopisa uye rinobatsira kutora kupisa muchando chinotonhora.
Yakaderera-kiyi-Vatengi vazhinji vanotiudza kuti nekuda kweiyo yakashongedzwa yakaderera-kiyi dhizaini, vanofarira kushandisa zvivharo izvi sengowani linings, pyjamas kana kunyange chemotherapy caps. Yedu yepedyo-yakakodzera uye yakapfava chimiro chakanakira misoro yemhanza, ganda remusoro rinonzwa uye marudzi ese ebvudzi kugadzirwa.
Kushandisa: Zvipo zvakanaka zveMuslim zveEid al-Fitr, Ramadan, munamato, Namaz mhemberero, kushandiswa kwemazuva ese kana zvimwe zviitiko zvakanaka.
Zvakapfuura: TR Yakadhindwa Yemeni Turban Wool Fabric Yakadhindwa Headscarf
Zvinotevera: 5–10CM White Saudi Arabian Embroidered Hat
Ciput Hijab, Hijab Dupatta, Muslim Cap Black, Best Muslim Cap, Mens Mosque Hats, Wool Kufi,